Minisitry ny fiarovam-pirenena «Tohizana ny fanenjehana ireo dahalo ambony latabatra»
Belo Tsiribihina Voarohirohy ho namono olona indray ny miaramila
Araka ny loharanom-baovaon’ny fianakavian’ny lasibatra, izay naparitany tamin’ny tambajotran-tserasera, heveriny fa noho ny tondro molotra dia natolotra ny miaramila ny momba an’i Raly Tovony.
Sinto-mahery sy halatra moto Babo ireo mpanendaka amin’ny alina eny Tanjombato
Voasambotry ny polisin’i Tanjombato ny 16 sy 19 jolay teo noho ny resaka fanendahana amin’ny alina eny amin’iny faritra iny ireo jiolahy efatra.
FISAVAN’NY ZANDARIN’ANKADINONDRY Gadra 2 nikasa hanafika fanineniny tamin’ny basy tra-tehaka
Gadra nitsoaka ny taona 2016 sy tovolahy iray mbola manefa sazy ao Tsiroanomandidy saingy nahazo fahefana miasa aty ivelany no tra-tehaka niaraka tamin’ny basy hanatanteraka fanineniny ny asa ratsin’izy ireo.
Ambatoboeny Nahazo efitrano sekoly sy paositry ny polisy
Ny talata lasa teo no notokanana tamin’ny fomba ofisialy ireo fotodrafitrasa nangatahin’ny mponina tao amin’ny distrikan’Ambatoboeny, faritra Boeny.
Zandarimariam-pirenena Handray mpianatra ho zandary 1200
Nampahafantarina nandritra ny filankevitry ny minisitra teny amin’ny Lapan’i Iavoloha ny alarobia 17 jolay lasa teo ny famoahana didim-panjakana momba ny fandraisana mpianatra ho zandary miisa 1200 ho an’ny taona 2019-2020.
Fankalazana ny “Mandela Day” Ankizy sahirana sy voafonja 600 nomena fanampiana
Nankalazaina omaly alakamisy 18 jolay ny « Mandela Day », ahatsiarovana ny daty nahaterahan’i Nelson Mandela niady
Tsy ampy ny hetsika mandalo ataon’ny mpitandro filaminana, mila jerena akaiky ihany koa ireo dahalo ambony latabatra tahaka ireo mpitandro filaminana tra-tehaka tamin’ny asan-jiolahy sy fakana an-keriny teo aloha.
“Misy amin’ireo natao hiaro ny olom-pirenena no miray tsikombakomba amin’ny jiolahy, miaro sy mamatsy fitaovam-piadiana azy ireo. Eo koa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry sasany, mila ravana avokoa ireny fa fototry ny tsy fandriampahalemana”, hoy i Aly Antoine Rafanomezantsoa, mpandinika ny raharaham-pirenena. Araka ny tatitr’ireo minisitera mpiahy ny fampandriana fahalemana, ankoatra ny fitaovana toy ny angidimby, nahitam-bokany ireo ezaka tato amin’ny volana vitsy. Miaramila 1.600 mantsy no napariaka manerana ny Nosy. Mbola nanambara aza ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Leon Richard Rakotonirina fa hapetraka ihany koa ny mpanara-maso manokana hitsirihana ny mety fihoaram-pefy ataon’ireo tompon’andraikitra any amin’ny faritra. Maro ihany koa ireo mihevitra fa tsy ajanona amin’ny ezaka miserana ny hetsiky ny mpitandro filaminana. Vao lasa mantsy ireto farany dia hirongatra hamaly faty indray ireo jiolahy.